कति खतरनाक छ कोरोनाको ‘सी.१.२’ भेरियन्ट? « AayoMail
कति खतरनाक छ कोरोनाको ‘सी.१.२’ भेरियन्ट?
2021,7 September, 7:27 pm
काठमाडौं – विश्वका अधिकांश देशहरु कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्टसँग जुझिरहेको बेला दक्षिण अफ्रिकामा पुन: नयाँ भेरियन्ट ‘सी.१.२’ ( C.1.2) पत्ता लागेको छ।
हालसम्म यस भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का रुपमा राखेको छैन तर, यसले सारा वैज्ञानिकहरुको ध्यान तानेको छ। यो भेरियन्टमा भएको कयौं म्युटेसन र छिटो फैलिन सक्ने क्षमता देखेर वैज्ञानिक हैरान छन्।
दक्षिण अफ्रिकाको ‘नेश्नल इन्स्टिच्युट अफ कम्युनिकेबल डिजिज’ ले गरेको अध्ययनअनुसार सी.१.२ सुरुदेखि चीनमा उत्पन्न भएको भेरियन्टदेखि हालसम्मको भेरियन्ट सबै यही भाइरसमा पाइएको देखिएको छ।
यो भाइरस सुरुमा दक्षिण अफ्रिकाको पाउमालाङगा प्रदेशमा भेटिएको थियो भने पछि न्युजिल्याण्ड, पोर्चुगल, स्वीट्जरल्याण्ड, कङ्गो, मरुसियसमा पनि भेटिएको छ।
अध्ययनअनुसार यो भेरियन्टमा यति धेरै म्युटेशन भएको छ कि, यो पहिलेको भाइरसभन्दा धेरै फैलिने र खोपको प्रभावकारीतालाई पनि कम गर्नसक्ने क्षमता राख्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ का रुपमा भाइरसलाई सूचिकृत गर्न धेरै व्यक्तिमा फैलिनसक्ने हुनुपर्ने, उपचारका विधिहरुलाई कमजोर बनाउन सक्ने तथा पुराना भाइरसभन्दा फरक हुनुपर्छ। तर, यस भाइरसलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्नका रुपमा अहिले नै राख्न हतार हुने डब्लुएचओका प्रवक्ता मार्गरेट ह्यारिसले बताए।
म्युटेसन हुनु भनेको भाइरसको विशेषता नै हो। जति धेरै मानिसहरुमा यो भाइरस फैलन्छ, त्यति धेरै म्युटेसन हुन्छ। मानिसको शरीरमा भाइरस पसिसकेपछि यसको सेललाई धेरै संख्यामा कपी गर्न लगाउँछ। एउटै खालका भाइरसका सेल बनाउँदा कहिलेकाँही गलत खालका डिएनए पनि बन्न सक्छन् जसलाई म्युटेसन भनिन्छ। प्रायजसो म्युटेसन भाइरसलाई नै नराम्रो हुन सक्छ, जसका कारण भाइरस आफैं मरेर जान्छ। त्यस्तै, भाइरसलाई राम्रो भए धेरै फैलाउन सक्ने र खोपसँग पनि बच्न सक्ने हुन्छ।
सी.१.२ लाई बढी ध्यान दिन किन जरुरी छ भने, यो चाँडो म्युटेन्ट हुन सक्छ भने धेरै म्युटेशन एकै ठाउँमा पनि हुन्छ। वैज्ञानिकहरुले डेल्टा भेरियन्टलाई म्युटेन्ट गर्न मद्दत गर्ने म्युटेसन यस भाइरसमा पनि छ वा छैन भनेर हेर्न चाहेका छन्। यस्ता म्युटेसन नयाँ भेरियन्टमा देखिनेबित्तिकै बढी ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।
सी.१.२ भाइरस दक्षिण अफ्रिकामा कमै देखिए पनि अफ्रिकाको पहिलो लहरमा देखिएको भाइरसको ‘लिनेज’ बाट उत्पन्न भएका कारण यसलाई बढी ध्यान पुर्याउनुपर्ने वैज्ञानिकको भनाई छ।
हाल अफ्रिकामा डेल्टा भेरियन्ट पनि फैलिइरहेको छ। सी.१.२ भाइरस झनै बलियो र फैलिने हुनाले डेल्टा म्युटेसनसँग मिल्न पर्दछ। जसले, डेल्टाभन्दा पनि धेरै फैलाउन सक्ने गुण राख्छ।
अब यो भेरियन्ट धेरै फैलिन्छ कि खोपको क्षमतालाई पनि कम गराउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, हाल यी सबै भेरियन्टबाट बच्न खोप नै एकमात्र उपाय हो।